: at 11/25/2010 08:22:00 AM
ငွေစန္ဒာ said... | Thursday, November 25, 2010 9:11:00 AM
အမရေ လူသားတိုင်း အနန္တမေတ္တာများစွာဖြင့် လူသားဆန်နိုင်ကြပါစေ။
noblemoe said... | Thursday, November 25, 2010 9:25:00 AM
ဒီပိုစ့်လေးကို like လုပ်လို့ ရရင်ကောင်းမှာပဲ။
တစ်ခါတစ်ခါ ကိုမန့်တာတွေက ရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ပေါ့သွားမှာဆိုးလို့ မမန့်မိပါဖူး။
“ ကျွန်တော် မတတ်နိုင်သော ကမ္ဘာလောကကြီးသို့ရောက်ခဲ့သည် ။ ကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားခဲ့မိသည် ” စာသားလေးသဘောလည်းကျမိ ကြိုးလည်းကြိုးစားရအုံးမည်။
ခြင် said... | Thursday, November 25, 2010 9:32:00 AM
ကိရေ.... လာဖတ်သွားပြီ သူငယ်ချင်း.... နေကန်းလား အဆင်ပြေပါစေ...
Anonymous said... | Thursday, November 25, 2010 1:30:00 PM
လုပ်နိုင်သလောက် လုပ်ကြရတာနော် ဖွားကိ
Anonymous said... | Thursday, November 25, 2010 1:37:00 PM
...အလင်းစက်များ said... | Thursday, November 25, 2010 1:54:00 PM
အဲ့ဒါ ရန်ကုန်နဲ့ဖင်နဲ့ခေါင်းကပ်နေတဲ့ အရပ်ဒေသကြီးပါတော်..... ဒါမျိုးကိုယ့်ခြေပေါ် ကိုယ့်ဖာသာ ရပ်နေကြတာတွေ အများကြီး... (ဘာ့ကြောင့်ဆိုတာတော့ မပြောတော့ဘူး စိတ်ကုန်လို့ )
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. ဒီလိုကူညီကြတဲ့ ကူညီဖို့စိတ်ရှိတဲ့သူတွေ ရှိနေကြတာကိုပဲ အားတက်မိတယ်... လူတိုင်းလဲ ကူညီဖို့ကြိုးစားသင့်တယ်... ကျနော်လဲ ကြိုးစားမယ်...
Unknown said... | Thursday, November 25, 2010 2:54:00 PM
ahphyulay said... | Thursday, November 25, 2010 7:15:00 PM
ဒီပို့ (စ)လေးက ဖတ်ခဲ့ ဘူးတဲ့ပို့ (စ)တွေနဲ့ မတူပဲ
အမတန်မြင့် မြတ်တဲ့ အလုပ်ကို အမက လုပ်ခဲ့ တာကိုး...။
ကိုဇော် said... | Thursday, November 25, 2010 9:21:00 PM
သာဓု . . .သာဓု... သာဓု...
ပီတိ ဖြစ်စေတဲ့ မြင်ကွင်းပဲ မကိရေ..။
ဝက်ဝံလေး said... | Friday, November 26, 2010 1:15:00 AM
မက်ရည်တောင် ဝဲဒယ် ဒေါ်ကိရယ်
Unknown said... | Saturday, November 27, 2010 2:36:00 AM
မကိတို့များ ဒါမျိုးဆို သံချောင်း မခေါက်ဘူး
ကျွန်တော်တို့လည်း ၀ါသနာပါ ပါ တယ်နော့
ဒါမှ မဟုတ် နောင်သံသရာ အဆက်ဆက်
လသာည said... | Saturday, November 27, 2010 10:30:00 AM
အရမ်းကို စိတ်ကြည်နှုးရတဲ့ မြင်ကွင်းလေးပါ မကိရယ်။ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ သာဓုခေါ်သွားပါတယ်။